दाहल भन्छन – ‘प्रधानमन्त्री ज्यु सुधार आफैबाट गर्नुस् भने’ – Gulmiews
दाहल भन्छन – ‘प्रधानमन्त्री ज्यु सुधार आफैबाट गर्नुस् भने’
गुल्मी, असार–१३ । नेपाली संविधानको ज्ञाता तथा नेपालको प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहलले प्रशासनिक निकायको सुधारका लागि आफुले प्रधानमन्त्रीलाई आफैबाट सुरु गर्न सुझाव दिएको बताए । सेवा प्रवाह र न्याय सम्पादन विषायक अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुन सोमवार गुल्मी आई पुगेका दाहलले भने–‘ प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारको विषयमा तयार पारिएको पुस्तक विमोचन र कार्यपत्र पेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मैले के गर्नु पर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो, मैले–‘ तपाई आफुबाटै सुधारको सुरुवात गर्नुस् भनेर भने ।’
नीति र कार्यपत्रले मात्रै प्रशासनिक क्षेत्र र न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा सुधार नहुने बताउँदै उनले व्यक्तिको संस्कार र आचरण सुधार हुनु पर्नेमा जोड दिए । अहिले आफै सांसद, आफै बैंकको अध्यक्ष र कुनै एनजिओको अध्यक्ष समेत भएको चर्चा अहिले निकै चलेको छ , एउटै व्यक्ति कति वटा पदमा वस्ने ? अनि उ बाट कस्तो अपेक्षा राख्ने ? उनले प्रति प्रश्न गर्दै भने अव त्यो संस्कारमा सुधार हुन जरुरी छ ।
शिक्षामा मात्रै ४ सय ८८ उपसचिवको अत्तपात्तो छैन्
उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार तथा कार्यन्वयन अनुगमन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका दाहलले नेपालका कर्मचारी तन्त्रमा दरवन्दी भद्रगोल अवस्थामा रहेको खुलासा गरे । उनले भने–‘ शिक्षा मन्त्रालयमा मात्रै ४ सय ४८ जना उपसचिवहरुको अत्तोपत्तो छैन् । झन स्वास्थ्य, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा त को कहाँ छन भन्ने कुरा समेत थाह छैन् ।’
नीति एकातिर मान्छे अर्कोतिर भएको तर्क राख्दै उनले भने –‘नियममा निजामती कर्मचारी विदा स्वीकृती नगरी ९० दिन सम्म घर बसे ९१ दिनका दिन स्वतः उ वर्खास्त हुन्छ तर वास्तविकता यस्तो छ उ आठ नौं वर्ष सम्म विदेशमा वसे पनि जागिरमै हुन्छ ।’ उनले थपे–‘ झन शिक्षा विभागको नियमावलीमा एउटा शिक्षक १५ दिन सम्म विना स्वीकृती पढाउन गएन भने १६ दिनका दिन स्वतः उ वर्खास्तीमा पर्छ जुन कार्यन्वयन भएको पाउनु भएको छ ? भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधीलाई उनले प्रश्न गरे । प्रशासनिक क्षेत्रमा एकिकृत सेवा प्राणाली र घुम्ती शिविर गरिनु पर्ने नीति भए पनि कार्यन्वयन नभएको बताउँदै उनले भने– गु््ल्मीको मालपोत कार्यालय प्रशासन भन्दा धेरै टाढा भएर सेवाग्राहीले दुख पाएको रहेछन् ।’
गुल्मीको मालपोत कार्यालय गाउँलाई बजारीकरण गर्नका लागि स्थानियले जग्गादान दिएर प्रशासनबाट आधा घण्टाको दुरीमा भवन निर्माण गरी सारिएको छ । त्यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पशु सेवा, आयुर्वेद कार्यालय पनि स्थानियले वजारीकरण गर्नका लागि जग्गादान दिएर प्रशासन देखि झण्डै एक घण्टाको दुरीमा राखिएको छ । यसमा सुधार हुनु पर्ने दाहलको जोड थियो ।
प्रमख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कंडेलले पनि यस्तो हुन नहुने बताए पनि ति कार्यालय सार्नेबारे कदम चाल्ने सुरसार देखिएको छैन् । प्रशासनिक क्षेत्र र न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि लेखिएका पुस्तक र प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कंडेल र जिल्ला न्यायधिस मातृकाप्रसाद मरासीनीलाई हस्तान्तरण गर्दै दाहलले उनिहरुलाई कार्यन्वयन पक्षमा जोड दिन सुझाव दिए ।
सामाजिक शक्ती वलियो नभए सम्म कार्यन्वयन नुहुने
अध्यक्ष दाहलले जारी भएको संविधान र प्रशासनिक क्षेत्रको नीति सामाजिक शक्ती वलियो नभए सम्म कार्यन्वयन नहुने ठहर गरेका छन् । उनले –‘ जव सम्म सामाजिक शक्ती बलियो हुन्न तव सम्म कार्यन्वयन हुन सक्दैन जसका कारण हामी फेरी द्धन्द्धको भुमरीमा फस्ने छौं । ’
प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीति अलग अलग नभए सम्म सुशासन दिन नसकीने भन्दै उनले एउटा कर्मचारी कति समय सम्म एउटा कार्यालयमा बस्न पाउने र काजमा रहने ? त्यो अवधी भन्दा बढि बसेको भए सात दिन भित्र प्रशासन मार्फत उजुरी दिएर माथी पठाउन सुझाव दिए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका स्वास्थ्यकर्मीहरु वर्षऔं देखि एकातिर दरवन्दी अर्कोतिर काजमा रहेका छन् । त्यस्तै अन्य कार्यालयमा पनि वषौं देखि वसेका छन , उनिहरुलाई कुनै शक्तीले हिलाउन सक्दैन नि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा यहाँका राजनैतिक दलका नेता र अन्य सरोकारवालले आत्मा हत्या गर्न बाध्य बनाउनेहरुलाई कार्वाही गरिनु पर्ने कानुन बनाईनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
२४ बुँदे गुल्मी घोषण पत्र जारी
उक्त अन्तरकृया कार्यक्रममा चुस्ता एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि २४ वुँदे प्रतिवद्धता घोषणा पत्र जारी गरिएको छ । उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार कार्यन्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष दाहलको रोहवरमा गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलले सवै कार्यालयको तर्फबाट प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त २४ वुँदे घोषणा पत्रमा सशुसन, सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरुको सहज पहुँच जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरु रहेका छन् । उक्त प्रतिवद्धता पत्र जिल्ला प्रशासनमा रहने वडापत्रका रुपमा हरेक कार्यालयहरुमा टाँस गर्ने बताईएको छ । अन्तकरकृया कार्यक्तममा अध्यक्ष दाहल सहित सदस्य कुमारयोञ्जन तामङ्ग र रजिष्टार ममता खनाल पनि आएकी थिईन् ।